Ku iibso Bitcoin Malaysia si degdeg ah oo Amaan ah | Paxful
Ka iibso Bitcoin Malaysia
Suuqa horseedka ah ee Bitcoin waxaa hadda laga heli karaa Malaysia. Soo iibso jajabyada lacagta oonleenka ah ama u baddelo MYR gaaga BTC si deg deg ah oo aamin ah adoo isticmaalaya Paxful.
Ayadoo ku dhowaad 400 siyaabood oo lagu iibsado Bitcoin ay jiraan, waxaad si dhib la’aan ah ugu boodi kartaa suuqyada sii koraya ee lacagta oonleenka ah ee Malaysia iyo wixii ka baxsan. Waxaad ku bilaabi kartaa ugu yaraan 42 MYR oo ah qiimaha BTC adoo adeegsanaya xulashooyinka lacag bixinta ee caanka ah ee waddanka sida wareejinta bangiga, Kaararka Hadiyadaha Razer Gold, Kaararka Hadiyadaha ee Google Play, PayPal, iyo kuwo kale.
Waad eegi kartaa kumanaan yaboohyo oo Bitcoin ah waxaadna BTC ka iibsan kartaa malaayiin isticmaale Paxful ah oo ku kala nool dalal kaladuwan ayadoon lagaa qaadeen khidmado dheeraad ah. Guud ahaan diyaar ma u tahay safarkaaga maaliyadeed aad kor u qaado heer kiisa? Isk diiwaangeli hadda hadaadan wali iibsan oo Bitcoin ka iibso Malaysia maanta.
Yaboohyada ugu sareeya ee Malaysian Ringgit oo ku jirta Malaysia
Ku bixi lacagta
Cadadka ugu yar—Cadadka ugu badan
ku bixi doolar
lacagta doolarka ah
Qiimaha halkii Bitcoin ba
Waxaad iibsan kartaa jajab
La eegay 2 saac kahor Xawilaadda Bangiga — Text me for account
risiid ayaa qasab ah wada hadal ma jiro Paxful 6
200.00-1,732.00 MYR 200.00 MYR $0.71 Iibso 200,906.20 MYR Iibso Iibso
La eegay 35 daqiiqo kahor Kaarka Hadiyadda Steam Wallet — Im not offline
looma Baahna Risiid koodhadhka oonleenk ah waa la aqbalay looma Baahna Xaqiijin
43.00-5,000.00 MYR 43.00 MYR $0.62 Iibso 231,616.14 MYR Iibso Iibso
Oonleen Kaarka Hadiyadda Google Play — Honest fast and reliable
50.00-1,000.00 MYR 50.00 MYR $0.74 Iibso 193,730.97 MYR Iibso Iibso
La eegay 34 daqiiqo kahor Kaarka Hadiyadda Razer Gold — Need daily supplier
looma Baahna Risiid koodhadhka oonleenk ah waa la aqbalay
50.00-5,000.00 MYR 50.00 MYR $0.74 Iibso 193,730.97 MYR Iibso Iibso
La eegay 6 saac kahor Kaarka Hadiyadda Google Play — Quick and honest
50.00-999.00 MYR 50.00 MYR $0.74 Iibso 193,730.97 MYR Iibso Iibso
Oonleen Kaarka Hadiyadda Google Play — Fast and reliable
looma Baahna Risiid Paxful 6
100.00-500.00 MYR 100.00 MYR $0.73 Iibso 195,151.67 MYR Iibso Iibso
La eegay 1 daqiiqo kahor Kaarka Hadiyadda Google Play — Trade honestly
50.00-2,001.00 MYR 50.00 MYR $0.73 Iibso 195,166.02 MYR Iibso Iibso
La eegay 2 daqiiqo kahor Kaarka Hadiyadda Google Play — Trade honestly
koodhadhka oonleenk ah waa la aqbalay lacag bixinnada oonleenka ah
50.00-500.00 MYR 50.00 MYR $0.73 Iibso 197,605.59 MYR Iibso Iibso
La eegay 3 daqiiqo kahor Kaarka Hadiyadda Razer Gold — Trade honestly
50.00-500.00 MYR 50.00 MYR $0.70 Iibso 203,704.53 MYR Iibso Iibso
Oonleen Kaarka Hadiyadda Razer Gold — instant release in 1 min
500.00-50,000.00 MYR 500.00 MYR $0.69 Iibso 208,081.42 MYR Iibso Iibso
Oonleen Kaarka Hadiyadda Razer Gold — Honest and fast
koodhadhka oonleenk ah waa la aqbalay looma Baahna Xaqiijin wada hadal ma jiro
50.00-200.00 MYR 50.00 MYR $0.68 Iibso 211,410.72 MYR Iibso Iibso
La eegay 51 daqiiqo kahor PayPal — release right away
kaararka rasmiga ah Keliya looma Baahna Xaqiijin ma jiraan Qolyo Saddexaad
125.00-835.00 MYR 125.00 MYR $0.62 Iibso 229,607.08 MYR Iibso Iibso
Oonleen Kaarka Hadiyadda Google Play — fast
koodhadhka oonleenk ah waa la aqbalay looma Baahna Xaqiijin Paxful 6
50.00-1,000.00 MYR 50.00 MYR $0.62 Iibso 231,257.38 MYR Iibso Iibso
La eegay 1 daqiiqo kahor Kaarka Hadiyadda Steam Wallet — Trusted And Within 1min
50.00-1,000.00 MYR 50.00 MYR $0.62 Iibso 231,759.65 MYR Iibso Iibso
La eegay 1 daqiiqo kahor Kaarka Hadiyadda Google Play — Honest and fast
kaararka rasmiga ah Keliya wada hadal ma jiro
50.00-100.00 MYR 50.00 MYR $0.75 Iibso 191,147.89 MYR Iibso Iibso
Oonleen Kaarka Hadiyadda Steam Wallet — Fast Release In 2mins
koodhadhka oonleenk ah waa la aqbalay
50.00-500.00 MYR 50.00 MYR $0.61 Iibso 236,638.80 MYR Iibso Iibso
La eegay 1 daqiiqo kahor Kaarka Hadiyadda Steam Wallet — Honest and fast
50.00-9,000.00 MYR 50.00 MYR $0.61 Iibso 236,782.30 MYR Iibso Iibso
La eegay 1 daqiiqo kahor Kaarka Hadiyadda Razer Gold — Fast and honest
100.00-1,000.00 MYR 100.00 MYR $0.60 Iibso 237,571.58 MYR Iibso Iibso
Oonleen Kaarka Hadiyadda Steam Wallet — fast and honst
looma Baahna Risiid kaararka rasmiga ah Keliya
50.00-500.00 MYR 50.00 MYR $0.60 Iibso 238,217.35 MYR Iibso Iibso
La eegay 8 daqiiqo kahor Kaarka Hadiyadda Google Play — Honest and reliable
looma Baahna Risiid kaararka rasmiga ah Keliya Paxful 6
100.00-1,000.00 MYR 100.00 MYR $0.60 Iibso 238,360.85 MYR Iibso Iibso
Qaababka lacag bixinta ee ugu badan Malaysia
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah Xawilaadda Bangiga maanta.
Ku iibso Bitcoin Xawilaadda Bangiga
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah PayPal maanta.
Ku iibso Bitcoin PayPal
Kaarka Hadiyadda Steam Wallet
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah Kaarka Hadiyadda Steam Wallet maanta.
Ku iibso Bitcoin Kaarka Hadiyadda Steam Wallet
Kaarka Hadiyadda Razer Gold
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah Kaarka Hadiyadda Razer Gold maanta.
Ku iibso Bitcoin Kaarka Hadiyadda Razer Gold
Kaarka Hadiyadda Google Play
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah Kaarka Hadiyadda Google Play maanta.
Ku iibso Bitcoin Kaarka Hadiyadda Google Play
Kaarka Hadiyadda OneVanilla VISA/MasterCard
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah Kaarka Hadiyadda OneVanilla VISA/MasterCard maanta.
Ku iibso Bitcoin Kaarka Hadiyadda OneVanilla VISA/MasterCard
Waa maxay Paxful?
Waa suuqa Bitcoin ka dadwaynaha caadiga ah kala gataan kaasoo iibsadayaasha ku xira iibiyaasha. Keliya dooro qaabka aad doonayso inaad lacagta ku bixiso iyo nooca cadadka Bitcoin-nada ka aad u baahan tahay.
Yoolkeenu waa inaan siino dadka shaqaynaaya aalad fudud, loo siman yahay oo amaan ah oo ay ku ganacsan karaan. Badanaa ciladaheena ugu waawayn waxay quseeyaan lacagta, helisteeda iyo qaadisteeda. Waxaan u taagan nahay daah ka rogida awooda dadka anagoo dhisayna aalada fududaynta lacag bixinta dadku isdhaafsadaan ee mustaqbalka. Paxful waa PayPal + Uber iyo peoples Wall Street.
Miyaan ku iibin karaa Bitcoin aalada Paxful?
Ka caawi dadka kale ee jooga Malaysia inay helaan Bitcoin kadibna hel faa'iidooyin waawayn oo dhan 60% iib kasta oo aad samayso.Billoow inaad ku iibiso koontada baanka maxaliga ah hadda, arag tusmadeena bilaashka ah.. Paxful ayaa heesha 1000 qof oo iibsata Bitcoin kana socda Malaysia maalin kasta.
Furo ciwaan oo billoow inaad iibiso
Hel Dakhli Culus
Ma taqaanaa dad badan oo doonaaya inay Bitcoin ku gataan gudaha Malaysia? Adoo kaashanaaya Dukaankaaga Bitcoin iyo Barnaamijka iskaashatada waxaad helaysaa 2% ganacsi kasta abidkaa adoo la wadaagaaya lifaaqa. Hadda biloow.
Iibso Bitcoin hadda adoo adeegsanaaya qaabka aad doonayso ee lacag bixinta Hadda iibso Bitcoin